Iidiliya ezisikelelekileyo zeXesha leNdlala-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Iingcebiso zediliya ezisikelelekileyo, ubusi, kunye namandongomane, anikwe	NguLuz de Maria de Bonilla .
INkosi yethu uYesu Krestu:
Oktobha 27, 2014
Andikulahlanga. Ungalibali ukugcina kumakhaya akho iidiliya ezisikelelwe eGameni lam ngamaxesha endlala. ”
nqakraza Apha emva koko ucofe u "Indlela yokupheka iidiliya eziBusisiweyo ngexesha leNdlala," ufunde ingxelo kaLuz de María ngendlela yokulungisa iidiliya ezisikelelekileyo (okanye ezinye iziqhamo ezincinci, ukuba iidiliya azifumaneki).
ILuz de Maria:
Aprili 22, 2010
U-Kristu kunye noMama osikelelekileyo bandixelele ukuba ukuba sikusikelela ukutya okunesifo-injalo, ukuhlala sigcina ukholo oluninzi-ngekhe kusenzakalise.
Izulu alibashiyi abantwana balo abathembekileyo, ngenxa yoko linike iingcebiso zokujongana nokungcola kokutya, ngakumbi abo bahlala kwiindawo ezinokutya okungcolisekileyo.
Umyalezo wabucala weNkosi yethu uYesu Krestu kuLuz de Maria:
Ntombi ethandekayo, i-spoonful yobusi kunye namanye amantshontsho aya kuba kukutya okwaneleyo ukuze umzimba uphile: banikezela okufunekayo ukuze onke amalungu asebenze ngokufanelekileyo. Xelela abantwana bam, ukuba ubasikelele ngexesha lendlala.
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, Ukukhuselwa ngokwasemzimbeni kunye nokuLungiselela.
← UPedro Regis kwiNdawo yoXolo
Ukulwa Neentsholongwane Nezifo… →